ओरियन्टल होटल्स : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, १ असोज २०७६)
यस कम्पनीले अघिल्लो आवको मुनाफाबाट गतवर्ष शेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस शेयर दिएको थियो । अहिले लाभांश प्रस्ताव गर्ने क्रम चलिरहे पनि हालसम्म कम्पनीले गतवर्षको लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन । गत आव २०७५/७६ मा यस कम्पनीले रू. २९ करोड ७८ लाख ३७ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आव २०७४/७५ को सोही अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा रू. २९ करोड ८ लाख ५७ हजार थियो ।
अघिल्लो आवमा होटल सञ्चालनबाट रू. १ अर्ब १७ करोड १५ लाख ६४ हजार आम्दानी गरेको कम्पनीले गतवर्ष आम्दानी रू. १ अर्ब २३ करोड ४८ लाख ६४ हजार पुर्‍याएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ७ करोड ४३ लाख ७१ हजार छ । जगेडा कोष रकम रू. १ अर्ब १७ करोड १८ लाख ७ हजार छ । मंगलवार कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य २८ अंक बढेर रू. ५२५ कायम भएको छ ।
2019-09-18 - 486 view(s) - abhiyandaily